China ERW 219mm Tube Mill orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | TUBO
ERW219 Tube mill / pipa fikosoham-bary / famokarana fantsom-boaloboka / milina fanaovana paompy dia ampiasaina hamokarana fantsom-by 89mm ~ 219mm amin'ny OD sy 2.0mm ~ 8.0mm amin'ny hatevin'ny rindrina, ary koa toradroa sy rerctangular mifanitsy. Afaka namboarina ihany koa izahay mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa.
2.0- 8.0mm (Boribory Sodina)
2.0 - 7.0mm (Sodina Sodina)
- Fitaovana HRC, CRC, vy nandrisika
- Karazana Sodina boribory, Kianja ary mahitsizoro
- Tube manodidina 89mm - 219mm
- Tube mahitsizoro 70 x 80 - 200 x 180mm
- Ny hatevin'ny rindrina 2.0 mm - 8.0 mm
- Halavan'ny fantsona 6.0m - 12.0m
- Haingam-pandeha Max. 50 m / min
- Fomba fanamafisana GGP600kW Welding matetika matetika
- Fomba famoronana Famoronana mahazatra;
- Karazana fanapahana Fijerena fikomiana na fanapahana orbita (Saw Saw)
- Fametrahana herinaratra fametrahana Eo ho eo: 1100Kw
Izahay foana dia mamolavola sy manao ny tsipika tsirairay mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa tsirairay avy, mba hahafahan'ny mpanjifa tsirairay mividy ny tsipika misy azy tsara avy aminay.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa, azafady andefaso anay ny fangatahana. Mpanamboatra milina fantsom-pandrosoana sy mpamatsy fantsom-pandrosoana izahay, azonao atao izany.
Previous: China Factory ho an'ny milina fanapahana vy elektrika - Saw-tsikombakomba - TUBO
Manaraka: Saw mangatsiaka